Ụbọchị: 1 October 2019
Ationzọ gbọ njem Mberede na Istanbul N'okpuru Njikwa ISPARK
İSPARK, onye ntinye aka na IMM, na-eji mpaghara ndị a dị ka ebe a na-adọba ụgbọala iji gbochie iwu na ọrụ mbubata ịdebanye aha ya n'okporo ụzọ njem mberede. N'ọnọdụ mberede, ndị isi İSPARK kpọpụrụ ebe ndị a ozugbo na-enye ọrụ mbupu; ngwa ngwa [More ...]
Agbanyeghị Furtace Furnace na KARDEMİR
Ejiri ọkụ ọkụ nke 10 4, nke kwụsịrị na June na Karabük Iron na steel Factories (KARDEMİR), mechara ememme emume emume ncheta ụbọchị 112. Ndị otu ndị isi oche nke ụlọ ọrụ anyị bụ ndị bịara ememe ahụ dị ka ndị ọrụ zuru ezu [More ...]
Olu Azụmaahịa Unye Port Ga-abawanye
Obodo Ordu mepere emepe emepeala ọrụ iji mee ka azụmaahịa dị na tonye Port nwee ike ịga n'ihu n'enweghị nsogbu ọ bụla ma mepụta olulu na mmiri ga-ekwe ka ụgbọ mmiri belata. Nye Port Ọzọ Dock na Deepening Planning Project [More ...]
Okporo Capitalzọ Isi Dị Efe na Nsogbu
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na okporo ụzọ dị na boulevards, n'okporo ụzọ na n'ámá obodo. Ndi otu ndi Ngalaba Science Science na-emeghari uzo ohuru na uzo ha karia n’oge awa adighi agha adighi ike. SB SR S AH S [More ...]
Oge dị n'etiti 22: 00 na asọmpi Champions League n'etiti Galatasaray na Paris Saint-Germain. Nkwupụta nke Metro Istanbul kwuru dị ka ndị a; “Ezigbo ndị njem; 01 October 30 na Tuesday na 1: 2019 [More ...]
N'ebe ọdụ ụgbọ na 15 ebe YHT guzobere, a ga-enye ọrụ tebụl oroma iji nyere ndị njem aka belata ngagharị na / ma ọ bụ ọnọdụ pụrụ iche. Dabere na nkwupụta bipụtara na Official Gazette, TCDD Transport Inc. [More ...]
3 merụrụ ahụ n'ụgbọala mkpo ahịhịa na-ebu ibu na K Intahya. Ndị 3 merụrụ ahụ n'ihe ọghọm nke mere n'ihi mkpọda ụgbọ ala dara na nnukwu ihe mkpofu na ọkwa nke na-agafe na Kütahya. Dika ozi enwetara, ngabiga na Perli agbata gafere Ü.Ç management 06 BKH 490 plate [More ...]
A ga-eji dochie ọrụ nyocha nke onwe nọ na ISS na Velimeşe Kapıkule Katenary Line Kwuru Railway News na Akụkọ ndị ọzọ ị nwere ike ịmasịRayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Enweghị ndekọ ndekọ dị nro maka 25.01.2019 na sistemụ anyị.RayHaber [More ...]
Onye isi oche nke United Transport Worces (BTS) Onye isi Ala Diyarbakir Nusret Basmaci, Batman-Diyarbakir train train laarin larịị nke ịgafe n'ụzọ iwu na-akwadoghị kwa ọnwa, kwuru na ihe ọghọm ụgbọ okporo ígwè 4-5, ndị ọchịchị kwesịrị ime ihe ngwa ngwa o kwere mee, ka ọ gbakwụnyere. ụgbọ okporo [More ...]
2019 / 1 KPSS Center Banyere TCDD Transportation Co. Ebe ọ bụ na ntuziaka akụrụngwa na ahụike metụtara ndị ọrụ TCDD Taşımacılık A.Ş. Ekwesịrị ịmaliteghachị akụkọ banyere ahụike. Na Nkwupụta Ahụ Ike Ahụ; 1-Anya, Ntị-Nchi-akpịrị, Ọgwụ Medicine, General [More ...]
Newslọ ọrụ mgbasa ozi Bloomberg na-ekwu na usoro ire ere nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul na ndị mmekọ kwuru. Dị ka akụkọ Bloomberg si kwuo, ụfọdụ ndị mmekọ nke ọdụ ụgbọ elu nke atọ na-akwado ire ere òkè ha na ọdụ ụgbọ elu, ebe ha dị ijeri dollar 11. Investmentlọ akụ US na-etinye maka ire a [More ...]
Ankara-Sivas n'etiti awa 2 ga-ebelata ụzọ Silk Road 405 Km n'etiti ọrụ Ankara-Sivas YHT na-aga n'ihu na-agba ọsọ. Ankara-Sivas High Train Project Train, nke agụnyere na usoro mmemme kwa ụbọchị nke 100, [More ...]
Ationgbọ njem na okporo ụzọ nchịkwa nke Kocaeli Obodo ukwu n’okpuru nhazi nke ọtụtụ ihe dị mkpa nke obodo iji ruo n’ụlọ na azụmaahịa nke ụmụ amaala Transportgbọ njem TransportationPark A.Ş. na-ebugharị ndị njem 82 puku 183 n'otu ụbọchị [More ...]
Taa na History: 1 October 1937 Çatalağzı-Zonguldak akara
1 October 1882 II.Abdulhamid na History N'okpuru ya pụrụ iche, ọ rịọrọ ka e guzobe ụlọ ọrụ mgbanwe iji kwurịta mgbanwe ndị a ga-eme na alaeze ahụ na ịkọwapụta ya. Nafia Minista Hasan Fehmi Pasha n'okpuru nchịkọta Nafia nke dị n'ọhịa ahịa, ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo [More ...]